नो टच प्लिज !- विचार - कान्तिपुर समाचार
‘त्यो अंकलले मेरो शरीर छुनुभयो, गाला समाउनुभयो । कसैले यस्तो गर्‍यो भने मामुले नो टच प्लिज भन्नुपर्छ भनेर सिकाउनुभएको छ ।’
चैत्र ९, २०७७ रेजिना पाण्डे
यो सबै नियालिरहेकी मैले पछि बालिकालाई सोधें, ‘नानु, तिमीलाई त्यो ब्याड टच थियो भनेर कसरी थाहा भयो ?’ मेरो प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले भनिन्, ‘त्यो अंकलले मेरो शरीर छुनुभयो, गाला समाउनुभयो । कसैले यस्तो गर्‍यो भने मामुले नो टच प्लिज भन्नुपर्छ भनेर सिकाउनुभएको छ ।’ उनकी मामु शिक्षिका रहिछन् । यस्ता घटना हरेक टोल, पसल र गल्लीमा भइरहेका छन् । तर, कतिले ती बालिकाको जस्तो प्रतिकार गर्न सक्छन् ? कति मामुले यसरी छोरीहरूलाई सिकाउन सक्छन् ? सानै उमेरमा यौनजन्य हिंसा भोगेका बालिकाहरूको जीवन सुखद हुन्न । कति बालिकाले यौन हिंसाका कारण ज्यानै पनि गुमाइरहेका छन् ।
केही समयअघि कोटेश्वर नजिकैको पार्कमा एक युवकले बालिकाको शरीर सुमसुम्याइरहेको थियो । यस्तो देखेपछि बाटो हिँडिरहेका व्यक्तिले ‘के गरेको’ भनेर हकारे । ती युवक भाग्न खोज्दै थिए, वरिपरिका मानिसले समाते, कुटपिट गरे । पछि थाहा भयो, ती युवक बालिकाकै आफन्त रहेछन् । उनले चकलेट खान दिई, फकाई–फुलाई गरेर बालिकालाई पार्कसम्म ल्याएका रहेछन् । चिनेकै आधारमा ती बालिका युवकसँग नजिक भएकी थिइन् । तर, उनलाई त्यो युवकको स्पर्श ‘ब्याड टच’ थियो कि ‘गुड टच’ भन्नेबारे थाहा थिएन । त्यसैले उनी यौन हिंसा भोग्नुपर्‍यो । आफ्नो शरीर छुन दिन हुन्न भन्ने ज्ञान भइदिएको भए सायद उनले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्थिन् होला । त्यसैले मान्छेको छुवाइ ‘ब्याड टच’ हो वा ‘गुड टच’ भन्नेबारे हरेक बालिकाले जान्न आवश्यक छ ।
जागिर वा व्यवसाय गर्ने आमाबुबाले छोराछोरीलाई घरमा एक्लै छोडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । आमाबुबा साथमा नहुनुले पनि बालिकाहरू यौन हिंसामा परिरहेका छन् । बालिका एक्लै भएको मौका पारी खराब मानसिकता भएकाहरूले छोरीहरूको जीवन अन्धकारतिर धकेलिरहेका छन् । यसो नहोस् भन्नका लागि आमाहरू सचेत हुनुपर्छ । आफ्ना नानीहरूलाई सानैदेखि यौन हिंसाबारे सचेत बनाउनुपर्छ । जोकोहीलाई आफ्नो शरीर छुन दिनु हुन्न, गोप्य अंग देखाउनु हुन्न, अरूलाई विश्वास गरेर आफ्ना कुराहरू सुनाउनु हुँदैन र कसैमाथि अविश्वास लागिहाल्यो भने नहिचकिचाई घरमा भन्नुपर्छ भनेर हरेक आमाले छोरीहरूलाई सिकाउनुपर्छ । छोरीहरूको पखेटा नकाटी उनीहरूमा आत्मविश्वास भरिदिने काम आमाले गर्नुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार घातक र डरलाग्दो रोगै बनिसकेको छ । महिला/बालिकामाथि भएका यौन हिंसा सार्वजनिक हुने क्रम बढिरहेको छ । आफ्नै काका, भाइ, दाइ अनि शिक्षकहरूबाटै बालिका सुरक्षित छैनन् । वानेश्वरमा डेरा गरी बस्ने मेरी साथीकी छोरी पाँच कक्षामा पढ्छिन् । मेरी साथी र उनका श्रीमान् बैंकमा काम गर्छन् । उनीहरूले छोरीलाई विद्यालयबाट फर्कनेबित्तिकै ढोका लगाउने, चिनेकै मान्छेले केही दिइहाले पनि नखाने, कोही घरमा आइपुगे भिडियो कल गर्ने, आफन्तहरूलाई टाढैबाट नमस्कार गर्नेजस्ता कुरा सिकाएका रहेछन् । सिकाएअनुरूप नै छोरीले यी सबै कुरा दैनिक जीवनमा लागू पनि गरेकी छन् रे । छोरीहरूलाई सुरक्षित राख्न अन्य अभिभावकले पनि यस्तो तालिम दिनुपर्छ । कतिले त कराते पनि सिकाएका छन् । छोरीहरूको मनोबल कसरी बढाउने भन्नेबारे परिवारै चनाखो हुनुपर्छ ।
एकातिर समाज विकसित हुँदै छ, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ, अर्कातिर यौन हिंसा पनि बढ्दो छ । यस्तो कसरी हुन सक्छ ? यौन हिंसा बढ्नुका थुप्रै कारण हुन सक्लान् । तीमध्ये एउटा हो— सानै उमेरमा अश्लील सिनेमाको लत बस्नु । इन्टरनेटको विस्तारसँगै काल्पनिक अश्लील कथा र तस्बिरहरू अहिले हरेकका हातहातमा सजिलै पुग्छन् । सानै उमेरमै यौनांग र यौनसम्पर्कप्रति चासो बढ्न थालेको छ । उनीहरूको कौतूहलले स्वाभाविक निकास पाएन भने यौन हिंसा निम्तिन्छ ।
आज छोरीहरूको स्वतन्त्रता हराइरहेको छ । यौन हिंसा हरेक स्थानमा भइरहेको छ । छोरीहरूलाई न खुला स्थानमा खेलाउन/डुलाउन सकिन्छ, न त आफन्तलाई विश्वास गरेर छोड्न नै । छोरीहरू ढुक्क भएर सार्वजनिक स्थानमा हिँड्ने परिस्थति अझै बनेको छैन । सार्वजनिक यातायात पनि महिलामैत्री छैन । बसमा यात्रा गरिरहँदा नजानिँदो तरिकाले शरीर छुने गरिन्छ । भीडमा हिँड्दा पनि बालिकाको शरीरमा अरूका हात सलबलाउँछन् । हरेक दिन कोही न कोही माहिला/बालिका यसको सिकार भइरहेका छन् । यसले महिलाको व्यक्तित्व विकासमा पनि बाधा पुर्‍याइरहेको छ । साँझ घर पुगेर आफ्नी छोरीलाई अँगालो नहालेसम्म आमा ढुक्क हुन सक्दिनन् ।
यौन हिंसा कम गर्न हरेक क्षेत्रमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । बालिकाहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा आमाहरूले मात्र होइन, समाज र सरकारले नै सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थानलाई सुरक्षित बनाउन सरकार र सुरक्षा निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । यसले केही हदसम्म भए पनि छोरीहरूलाई निर्धक्कसँग बाँच्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नेछ । विद्यालयले पनि ‘ब्याड टच’ र ‘गुड टच’ का बारेमा ज्ञान दिनुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ ०८:४२